Casharrada rakibaadda Gentoo ee CD kasta oo Live ah | Laga soo bilaabo Linux
Casharrada rakibida Gentoo ee CD kasta oo Live ah
x11tete11x | | Qaybinta, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waad salaaman tahay x11tete11x, kani waa qaybtaydii labaad, markan waxaan kuu keenayaa Tutorial ku xiraya Gentoo
Marka hore waxaan rabaa inaan xuso in wax kasta oo qofku u baahan yahay ay ku jiraan Gentoo Wiki, ama ku jira Arki WikiSu'aalaha laxiriira rakibida waxay kujiraan buuga gacanta Gentoo. Waxaan u sameeyaa casharradan maxaa yeelay dhowr qof baa i weydiiyay, iyo sababta oo ah waxaan ku dari doonaa granite-ga u gaar ah marka aan rakibayo Gentoo.
Ogow taas dadka wax akhriya aad baa loogu qadariyaa distoorkan. Haa, waa distro meesha dhibaatooyinka ugu badan lagu xallin karo iyadoo la aqrinayo wiki-ga isla markaana la sameynayo xoogaa cilmi baaris ah (taasi waa, haddii aad weydiiso su'aal oo ay kuugu jawaabaan "fiiri wiki-ga", waxay ka dhigan tahay inaad tahay isticmaale Gentoo ah inaad tahay aan wax si sax ah u samayn xD) Taas macnaheedu maaha in shakiga aan laga jawaabin
"Fudud", laakiin tirada badan ee dukumiintiyada waxay soo jeedineysaa inaad aqriso si aad u xalliso dhibaatooyinkaaga.
Hadda waxaan faallo ka bixin doonaa waxa uu Gentoo ku saabsan yahay, waxa aadka u soo jiitay ee ku saabsan, iyo waxa kaga duwan waxa ka duwan Linux distros-ka kale. Waxaan ka bilaabi doonaa aasaaska taas Gentoo waa astaan ​​sir ah oo ku saleysan distro, Tan macnaheedu maxay tahay? , taas oo ka duwan distros-ka caadiga ah (horay loo sii sameeyay) sida Debian, Ubuntu, halka, Manjaro, Fedora, SUSE, iyo dheer iwm iwm; Markaad xirxireyso xirmo, ma soo dejineyso fulinta (binary, .deb, .rpm, .pkg.tar.xz, iwm) oo rakib, laakiin waxay ka soo dejineysaa koodhkeeda, waxay ku ururinaysaa sida uu yahay processor-keena iyo sharciyada aan qeexnay. xirmooyinka, tanna waxay ku soo saartaa wax fulin ah, oo markaa ay rakibto.
Halkani waa meesha ay ku kala duwan yihiin, iyo waxa ka dhigaya tan 'distro' mid gaar ah, maahan oo kaliya xaqiiqda ah inay uruurineyso xirmooyinka, laakiin sidoo kale mid ayaa go'aansada taageerada waxa ay u egtahay xirmo kasta. Cawaaqibka tooska ah ee habka loo qaabeeyo iyo isu geynta xirmooyinka ayaa ah xawaaraha. Sababta Aynu ku tusaalayno tusaale:
X ha u ahaado distro la sii diyaariyay (kuwa aan horay u soo sheegay), si X distro-ka loogu rakibo noocyo kala duwan oo mashiinno ah, waxaa lagama maarmaan ah in xirmooyinkeeda lagu soo ururiyo tilmaamaha makiinadda duugga ah. Sidan oo kale, haddii aan dooneyno inay ka sii socdaan Pentium II wixii ka dambeeya, waxaan ku soo ururin doonnaa dhammaan xirmooyinkooda habka loo dejiyey Pentium II.
Cawaaqib noocee ah ayey tani keenaysaa? Waa maxay on processor-yada cusub, ka soo qaad i7, xirmooyinka ayaan ka faa'iideysan doonin dhammaan awoodaha dambe ee ay bixiyaan, maaddaama haddii ay soo uruuriyaan tilmaamaha ay soo saartay i7, ma awoodi doonaan in lagu dilo hawlwadeennada ka hor kan, maxaa yeelay kan dambe ayaa ka maqan tilmaamahaas cusub.
Gentoo, adigoo soo dejinaya koodhka ilaha oo aad u ururinayso processor-kaaga, ayaa ka faa'iideysan doona awooddiisa oo buuxda, maaddaama haddii aad ku rakibto i7, waxay u adeegsan doontaa tilmaamaha qaybta dambe, haddii aad ku rakibto Pentium II, waxay isticmaali doontaa kuwa u dhigma kan dambe.
Dhinaca kale, waxaad sidoo kale u habeyn kartaa nooca taageerada aad rabto xirmooyinka inay lahaadaan. Waan isticmaalaa KDE y Qt, markaa anigu ma xiisaynayo xirmooyinka aan ku haysto taageerada GNOME y GTK, sidaa darteed waxaan kuu sheegayaa inaad soo uruuriso iyaga oo aan taageero u hayn. In sidan, Markii la isbarbar dhigayo isla xirmada Gentoo iyo distro X, xirmada Gentoo aad ayey uga fududdahay. Maaddaama distro X xirmooyinka ay yihiin kuwa guud, waxay ku heli doonaan taageero wax walba.
Hadda, markii aan hordhac sameeyay, waxaan kaaga tagayaa xiriiriyeyaasha feyladayda qaabeynta ee la socda hagaha PDF maxaan ka qabtay sida loogu rakibo Gentoo midkasta oo ka mid ah Linux Live CD (Ubuntu, Fedora, SUSE, Backtrack, slax, ama wax kasta oo maskaxdaada ku soo dhaca) ama qayb ka mid ah oo ay ku rakibeen Linux distro.
Iskuxir Faylasha Abaabulka
Ku xirnaanta Hagaha PDF
Wixii ugu waalan ee ku saabsan waxqabadka, isla tilmaantaas ayaan kaaga tagay tilmaamo si aad u hesho waxqabad gaaraya ilaa 30% ka sareeya kan rakibida caadiga ah: O
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Casharrada rakibida Gentoo ee CD kasta oo Live ah
Haha iyo anigu waxaan bilownay inaan eegno buug-gacmeedka si loo rakibo Gentoo.
Waad ku mahadsantahay tuto.
Aad u fiican, waad ku mahadsan tahay hagaha.
Marwalba waxaan dhihi jiray cabsida isticmaaleyaal badan ee ku wajahan distoorkan waa mid aan sal lahayn ama waa caajisnimo.
Gentoo Linux wuxuu ahaa jacaylkeygii ugu horreeyay ee wanaagsan, waagaas markii aan lahaa rakibaye garaaf ah, waxay ahaayeen waqtiyo wanaagsan.
Waa in la ogaadaa (iyada oo aan la isku deyin in la yareeyo shaqadaada), in ay jirto hage rakibo oo loogu talagalay kuwa doonaya inay ku haystaan ​​Gentoo Linux kumbuyuutarkooda keydinta kumbuyuutarkooda, tan oo ka socota DVD-ga Live-ka ee la sii daayay sannad-guuradii distoorka rakibi doonaa dhammaan bay'adaha desktop-ka, Gnome, KDE, XFCE, iwm.).
Kordhinta labaad ee Ostentatious, miyaadan u malayn? Waxaan jeclahay tabarucaadka qiimaha teori sare leh kuwan oo kale. Bal qiyaas haddii aad hagaha ku dhejin lahayd boostada hahaha. Saaxiib aad u fiican, qor qoraalka. Ilaa casharka xiga ... Ma garanayo, Crux malaha?
hahaha waad mahadsantahay, laga yaabee xD hahaha
«(…) Waxaan ku soo ururin doonnaa dhammaan xirmooyinkaaga habka loo dejiyey Pentium II (…)»
Taasi run maahan. Markaad uruuriso xirmo waxaad go'aansan kartaa labadaba waa processor-ka ugu yar ee barnaamijka la soo uruuriyay ku shaqeyn doono iyo processor-ka aad rabto inaad ku hagaajiso isku-darka. Si kastaba ha noqotee, badanaa waxaa jira ikhtiyaari guud oo soo saaraya koodhadh ikhtiyaari ah oo loogu talagalay inta badan processor-yada. Sidoo kale, waxaa jira jaangooyooyin fara badan oo isbarbar dhigaya farqiga u dhexeeya waxqabadka u dhexeeya Gentoo iyo kuwa kale, mana aha wax la yaab leh sida aad mooddo inaad soo jeedinayso. Waxaad ku arki kartaa midkood halkan (http://socios.linuca.org/zub/zubmark-20031230.html), in kastoo ay jiraan kuwa kale oo badan dabcanna midna looma qaadan karo run run ah, had iyo jeer waa lagama maarmaan in si faahfaahsan loo darso waxa la qiimeynayo iyo sida loo sameynayo.
Way cadahay in ujeedada faallooyinka ay tahay oo kaliya in la cadeeyo, maadaama soo galitaankaagu uu ka turjumayo su'aalo aan gebi ahaanba sax ahayn. Waxaa laga yaabaa inay tahay adiga (waxaan qiyaasayaa) jacaylka aad u qabto Gentoo, mararka qaarkood way igu dhacdaa markaan kor u qaado wanaagga Debian, yaa og.
Sikastaba, salaan, iyo sii wadista fidinta xorriyadda!
Ku jawaab qashin
Hadday run tahay, waxaan sharraxaad ka bixiyay anigoo tixgelinaya haddii aad tahay "desktop" isticmaale waxaad dooneysaa inaad ka faa'iideysato qalabkaaga sidaa darteed waxaad u raaci doontaa si gaar ah processor-kaaga. Waxaan fahansanahay in waxa aan dhahayo ay umuuqdaan sidii inay ka dhaqso badnaayeen, PDF waxaan ku siinayaa talooyin aan ku hagaajinayo nidaam waxqabad sare leh oo aan ku dhaqaajinayo tiknoolajiyad la yiraahdo garaafto taas oo ereyo kooban oo kooban waxa ay qabato ay wanaajineyso wareegyada loogu talagalay "nooca iyo" halka "ay jiraan isticmaaleyaal isticmaalaya warbixintan illaa 30% waxqabad dheeri ah, waxaan ku rakibay calankaas la adeegsanayo iyo -O3 heerka ugu sarreeya ee ugu habboon, aragtidayda, oo aan ku barbardhigayo kubuntu, kaas oo sidoo kale in muddo ah ku jiray mashiinkan, Gentoo, oo leh qaab-dhismeedkaas, ayaa si dhakhso leh u socda. Si daacadnimo ah uma aanan fahmin sida garaafku u shaqeeyo, sida muuqata waxa ay sameyso waxay abuureysaa dhowr "xargo" oo loogu talagalay fulinta dhacdooyinka kan, qaabkan, marka la eego nidaamka waqtiga fulinta, waxay gaari laheyd amar 1 (maadaama waxay lahaan laheyd xariiq kasta oo soo noqnoqoshada ah) marka la barbardhigo amarka n ee kan guud, kani waa waxa aan fahmay xD, waa isku mid haddii qof uu ku cadeeyo tan, waxaan jeclaan lahaa inaad ii sharaxdid waxa ay qabato sax 😀
Agggghhhhhh comp Waan necbahay in kiniinigu i saxo, adigu waxaad * uruurin doontaa
Hagaag, hadaan is barbar dhigno Kubuntu ... xD
Kubuntu ma ahan mid aad u xun, runtii waan jeclahay: D, gaar ahaan markii Canonical ay joojisay taageeridiisii ​​isla markaana bulshada ay sii wadato, si aad u wanaagsan ayey u shaqeyneysaa. Maalin maalmaha ka mid waan caajisay waxaanan isku sawiray xoogaa kubuntu:
Kubuntu 12.10 32-bit boot, adigoon waxba taaban
Kubuntu waxay bilaabaneysaa kadib markii aan wax ka badal ku sameeyay (soo jiido adeegyo badan iwm iwm iwm iwm hoos nepomuk badal maamulaha daaqada waxaan dhigay sanduuqa furan iwm)
Tan waxaan ku illaaway inaan dilo nidaamka VMWare, oo cunaaya 50mb, marka waa inay kala goysaa 50, Kubuntu wuxuu daaray 10hs
Dhamaan qabqabashadani waxay la socdeen plasma firfircoon, haddii aan doonayo inaan ka saaro oo aan tusaale u soo qaato BE: Shell, waan dili lahaa nidaamka plasma-desktop
Waan jeclahay Kubuntu sababta oo ah sida xun ee 9.04 iyo 9.10 ay udhasheen, waxaan bilaabay indha indheyn distros ka socda KDE sifiican waana sidaan ku bartay Arch 😀
Markii aan bilaabay isticmaalka Arch oo aan ogaaday quruxda injineernimada iyo mabaadi'da aasaasiga waxaan ogaa inay ku jirtay / guriga, macaan / guri.
Waxaan ku weydiinayaa su'aal ku saabsan qabashada: miyuu baarka sare yahay guddi dhaqameed KDE ah? Hadday sidaas tahay, qaabkee ayaad ku dhex isticmaashaa oo qiyaas intee le'eg ayaa le'eg guddiga? Kaydinta midabka ayaa ah waxa ugu dhow ee aan ku arkay MacOS adoo adeegsanaya KDE.
Marka laga hadlayo cabbirka darbiyada ee KDE, waxay umuuqataa wax cajiib ah inaysan wali ku milmin balastarka 'OpenSUSE' oo si otomaatig ah kuu sheegaya inta uu goluhu weyn yahay markii aad weyneyso ama weynaato, fucking F / LOSS !!! xDD
Msx balastarkaasi ma jiraa? : Mise waan kugu dhaartay in aan ka raadinayay meel kasta, miyaad haysaa iskuxir? Ok, isku mid waa dhererka xD, font haddii aan si sax ah u xasuusto waa sans serif, mid ka mid ah kuwa sida caadiga ah ku yimaada, sirta ka dhigaysa farbarashada inay si fiican u muuqdaan ayaa ah in la kiciyo dhammaan ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee xarfaha, la dhigo "dhammaystirka" jilitaanka, oo lagu ciyaaro dpi, waxaan haystaa iyaga oo ku jira 120, oo lagu gaarayo natiijadaas 😀
Msx balastarkaasi ma jiraa? : Ama waan ku dhaaranayaa waan raadinayay meel kasta, xiriir ma haysaa? Waxaan siinayaa dagaal si aan u arko haddii aan ka dhigi karo inay ka shaqeyso Gentoo haha, »
Anigu hadda ma heli karo bogga, markaan gacanta ku haysto waan ku siin doonaa.
Inta aan kaaga tagayo mid ka mid ah xiriiriyeyaasha badan ee meesha aan kor ku soo xusnay looga wada hadlayo AMA suurtagalnimada in la beddelo cabbirka baararka iyadoo la adeegsanayo lambarro halkii laga isticmaali lahaa ojimeter> :(
«Si aad u sameysid xarfaha si aad u wanaagsan waa inaad dhaqaajiso dhammaan ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee font, ku dheji" buuxa "anti-aliasing, oo ku ciyaar dpi, waxaan ku haystaa 120,»
Hmm, kuuma sharxi karo waxa aan runtii ka necbahay font antialiasing, runti waa waxa ugu horreeya ee aan had iyo jeer gabyo ka dibna u dhigo hillaac iftiin ama dhexdhexaad ah marka curiyaha u oggolaado (ma ahan kiiska KWIN).
Markii aan in yar arko waan arki doonaa haddii aan uga tago sida kaaga, in kasta oo runtu tahay in dhawrka isbeddel ee aan ku sameeyay guddigayga (24px, qaar ka mid ah plasmoids dheeraad ah, iwm.) Aad ayaan u faraxsanahay maaddaama aan xitaa ku noolahay barnaamijyada ka bilaaba yakuake 😛
Waxaan dhameeyay aqrinta jaangooyooyinka, waxaan ku celcelinayaa waxay noqon kartaa in qoraalkayga uu waxyeelo ugeesteyda wanaagsan ee Gentoo, laakiin in Benchmark uu aad u duqoobay ._. Gentoo 1.4 (iyaguba waxay kujiraan daabacaadda 12) sidoo kale GCC wax badan ayey horumareen iyo arrinta processor-rada badan, si kastaba ha ahaatee khibradeyda ayaa ah tan soo socota markaad ku rakibayso -O3 ama xitaa -O2 dhadhanka afkaaga kaa tagaya, waa sida oo kale ayaa tilmaamaysa: "Guud ahaan waxay umuuqataa in Gentoo uu ku guuleysto shaqooyinka badankood si dhaqso leh marka loo eego Debian iyo binaries-ka la diyaariyay." Hadda markaan ku dhejiyay garaafka, shaqsiyan waan ogaaday, in loo arko inay runti waxyaabaha si dhakhso leh ku dhammeyso. 😀
Aad u fiican x11tete11x haddii aan wax ka ogaa qoraalkan waxaan sugayay waqti yar xD. Waqtigan xaadirka ah ee aan ku rakibayo X-ga 'Gentoo', waxaad igu dhiirrigelisay inaan markale tijaabiyo halkii aan ka ahaan lahaa Funtoo oo ah tii aan dhawaanahan ku rakibayay. Illaa iyo hadda wax waliba si aad ah ayey u socdaan, dejimaha aad ku dhejisey koollada si fiican ayey iigu adeegeen dhibaatada kaliya ee i haysata waa cusbooneysiinta nidaamka oo dhameystiran, goorma ayey saxan tahay in la sameeyo. Markan waxaan sameeyay kadib dib ubilaabtii ugu horaysay ee aan horeyba ugu lahaa jawi shaqo sidaasna aan ku cusbooneysiiyo gcc kahor intaanan rakibin barnaamijyo badan. Waxaan bilaabayaa inaan soo dejiyo xiriiradaan, baloog weyn waxaan ku dareemayaa halkan raaxo xD.
PS: Waxaan dhammeeyay ururinta xorg-server oo aan khaladaad lahayn, ku farxi maahan wax dhib badan haddii aad si taxaddar leh u akhrido. Marka laga hadlayo Blaire Pascal Crux ma aha fikrad xun, meelahaani waa meesha aad runtii wax ku barato. Salaan.
Ku jawaab Percaff
Waan ka xumahay, horay miyaad u isticmaashay freebsd ama bsd derivative?
Haa, marka la barbardhigo gentoo, maxay ku kala duwan yihiin? ama faa iidooyin.
Salaan kadib, mar hore ayaan aqriyay pdf dhan 😀 tan weyn.
Aad ayaan uga hooseeya FreeBSD Dhibaatooyin badan oo darawalnimo ah ayaan qabay, tusaale ahaan qaboojiyaha mashiinku wuu waashay, dhanka kale waxay iga dhigaysaa wax yar oo aan taariikhda ka yaraado, iyo sida ugu dhakhsaha badan ee kernel-ka Linux-ku u socdo, way ka sii waxyaabo badan oo xiiso leh, waa sababta aan u doortay Gentoo 😀
Haa, dhab ahaantii waxaan baaray gentoo vs freebsd (aniga kaliya kan iga dhiga qaali).
Laakiin gnu / Linux waxaan u arkaa inay aad ugu diyaar garowday ku dhowaad dhammaan noocyada xaaladaha. In ka badan wax kasta oo ku jira qalab casri ah.
Miyaad sidoo kale ku rakibtay gentoo kaniinigaaga? 😀
«Aniga ahaan midka kaliya ee isaga qaali ka dhiga» ROFL !!!
Hahahaha, Gentoo on iPad, laga yaabaa in la furaniboot laakiin waxaad u baahan tahay in la soo ururiyo koodhka isha, marka aad rakibto ubuntu, laakiin gentoo wuxuu noqon lahaa mid aad u xiiso badan 😉
Haha maya maya, iPad-kan aad ayuu ii xun yahay, waxaan ahay dhakhtar xD weyn, waxaan jecelahay inaan gacanta saaro oo aan shaashado wax kasta oo aan karo, iyo iPad-ka waxaan ku xirnahay gacmo iyo cag, nidaamku wuu fiican yahay, laakiin si fudud in, waxna lama qaban karo uu
Che, maalmo yar ka hor saaxiib ayaa i tusay Galaxy Note-ka la qaadan karo (waxaan u maleynayaa inay tahay 7 ″), oo ah gimmick, iyo waxa ugu horeeya ee aan sameeyay waxay ahayd inaan aado menu-ka oo aan arko nooca ay ku shaqeyneyso Android (4.04). Ninkii caatoobaa wuxuu sameeyay waji WTF !!! oo wuxuu i weydiiyay waxa ciyaaray in uusan weligiis arag xD-gaas
Waxaan u maleynayaa inaan si sahal ah u qaadano, sida wax dabiici ah, xaaladdeena saynisyahano kumbuyuutar sida muuqata ma ahan wax ku badan bulshada dhexdeeda oo hadii wax aan la arkin aysan jirin; macnaha guud ahaan macruufka iyo metro ayaa sifiican ugu habboon - sida Android annaga oo kale
Hordhac wanagsan oo ku saabsan Gentoo oo loogu talagalay dadka aan aqoon.
Kaliya si faahfaahsan: Arch Linux sidoo kale waxaa laga soo ururin karaa gabi ahaanba ilaha oo lagu sii wadi karaa iyada oo loo adeegsanayo habkaas, taas oo ah, sida ilo ku saleysan ilo maadaama dhammaan xirmooyinka ay bixiyaan nidaamku ay leeyihiin PKGBUILD u dhiganta (oo la mid ah EBUILDs) oo laga heli karo a aad u fudud iyada oo loo marayo ABS, Nidaamka Dhismaha Arch.
Waligey wax kuma rakibin sidan mana aqaano sida ay ficil ahaan u noqon karto in wax laga qabto, laakiin aragti ahaan farsamayaqaannadu way fududahay: soo dejiso PKGBUILD ee xirmada si aad u ururiso, u saxee xuduudaha waxa ay soo uruurinayso (isku mid calanka ISTICMAALKA), soo ururi oo ku rakib ama ku soo ururi oo diyaari haddii ay ku tiirsan tahay xirmo kale.
Sida meesha looga saarayo taageerada GNOME ee codsiyada KDE iyo tan kale, anigu ma hubo sida ay faa'iido u yeelan karto maaddaama codsiyo badan oo muhiim ah laga sameeyo labada qaab.
Haa, laakiin Archlinux ABS si otomaatig ah uma ururin ku-tiirsanaanta, mana jiro xakameyn sahlan oo ku saabsan kan dambe ama calanka isku-ururinta kale. Haddii aad ku darto ku tiirsanaanta, cidna dammaanad kama qaadi karto inay ku jirto bakhaarka, ama in nuqulkiisu yahay midka ku habboon. Iyo haddii aad rabto saameyn caalami ah waa inaad sheegtaa ku tiirsanaanta dhammaan PKGBUILD si loo rakibo. Sidoo kale ma jiro ansaxin hore oo ku saabsan xulashooyinka isku-duwidda ee ku-tiirsanaanta. Dhibaato kale ayaa ah in xulashooyinka la soo sheegay ay galaan PKGBUILD ee aysan ku jirin faylasha guud, taas oo adkeyneysa habka cusbooneysiinta.
Awoodda Gentoo waxay ku jirtaa suurtagalnimada in la doorto, mid caalami ah (dhammaan xirmooyinka), ama mid gaar ah (hal ama dhowr xirmo), oo xulashooyinka isku-darka iyo ku-tiirsanaanta loo isticmaalo in lagu dhiso ilo kasta oo tarbal ah (isbeddelada USE ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah), ee si loo ilaaliyo xakamaynta waxa ku rakiban. Portage wuxuu si otomaatig ah u hubiyaa in xirmo kasta oo jadwalka ah ku tiirsanaanta la soo uruuriyay, ama loo qorsheeyay in la soo ururiyo, iyada oo xulashooyinka lagama maarmaanka u ah qancinta ku tiirsanaanta xagga rogan. Sidoo kale, haddii hal isbeddel lagu sameeyo ISTICMAALKA caalamiga ah, ama maxalliga ah, sawir-gacmeedka ayaa awood u leh inuu doorto oo dib-u-ururiyo wax kasta oo lagama maarmaanka u ah isbeddeladaas inay ka muuqdaan. Sidoo kale, Portage waxay ka saari kartaa baakadaha aan loo baahnayn: soo bax - nadiif ah.
Dhinaca kale, Gentoo waxay siisaa qalab si loo xaqiijiyo in isku-xirayaasha firfircooni ay yihiin kuwo isdaba-joog ah, oo hagaajiya kuwa jabay, waa dhibaato lama huraan ah haddii aad nidaamkaaga ka cusbooneysiiso ilaha. Sidoo kale, waxaa jira aalad (iwm-cusbooneysiin) si loo ilaaliyo feylasha qaabeynta oo iswaafajiya loona cusbooneysiiyo: Waxaan sameyn karaa iskudhaf toos ah ama mid gacanta ah, iska tuuri karaa feylka cusub, ama hayn karaa midka ugu dambeeya.
Sidoo kale waa ansax in la dhaho xirmo kasta Gentoo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kala doorato noocyo kala duwan oo xasiloon, tijaabooyin, iyo maaskaro adag; waana ku mahadsan tahay boosaska waxaa suurtagal ah in lagu rakibo wax ka badan hal nooc isla markaa. Waxaas oo dhami waa lama huraan in la isticmaalo xakamaynta ku tiirsanaanta dhabta ah. Tusaale ahaan kaliya dev-libs / nss waxaan hayaa kuwan oo dhan:
3.12.11-r1, ~ 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, ~ 3.13.5-r1, 3.13.6, 3.14 iyo ~ 3.14.1
Halka kuwa aan ~ lahayn ay deggan yihiin.
Uruurinta dekedda 'Gentoo' waxay kudhowaad tahay 16000 xirmo ilo (oo leh noocyo kala duwan midkiiba), tusaale ahaan Debian Stable, oo caan ku ah uruurinta badan ee softiweer, waxay bixisaa qiyaastii 29000 binaries 14000 xirmo xirmo. Haddayna xirmooyinka aysan ku filneyn, waxaa jira is dulsaar ay dhisteen horumariyeyaasha, iyo bulshada, kuwaas oo ku kordhiya barnaamijyo badan.
Ma isku dayday Funtoo?
Maan isku dayin Funtoo. Laakiin waa wax ay tahay inaan ku qasbanaado maadaama ay bixiso waxyaabo aad u xiiso badan, sida isticmaalka git halkii loo isticmaali lahaa rsync si loo waafajiyo ebuilds (taas oo aan u maleynayo wax ku ool ah), qaab kale (iyo laga yaabee dhaqso) hab lagu soo ururiyo qalabka , iyo astaamo kale oo waxtar yeelan kara.
By the way, kaliya hadda waxaan ogaaday inaan u dhigay Juan sida Nick oo kale (hada waxaan u haystay joogteyn), maadaama aan marwalba isticmaalo Ankh ama Rubiño. Waxaan ku jahwareeray isticmaalaha facebook-ga oo ah inaan galo bogagga ku weydiinaya koonto shabakadda bulshada si aan faallo uga bixiyo.
Waxaan la ciyaaray Funtoo xoogaa, ma dhameystiri kareyn rakibo (waqtigaas waxba kama ogin Gentoo ama sida loo maareeyay USE CALANKA) maxaa yeelay dhibaato ayaa iga haysatay isticmaalka calamada maadaama Funtoo aysan cusbooneysiin "Astaamaha" markaa inbadan Markii dambe waxaan doortay inaan doorto halyeeyga Gentoo, hada markaan eegay, waxa igu dhacay waxay ahaayeen wax aad u fudud, waxay ahayd arin ku darida waxyaabo kooban xD
Waxay ku saabsan tahay 2 sano Arch, ABS sida aad u muujisay inay si fiican ugu adeegto in la soo ururiyo, laga bilaabo xirmo 1, iyo haddii aan rabno, inaan u sameyno sidii Gentoo, waa inaan gacanta ku qabannaa xirmo kasta iyo ku tiirsanaan kasta, ma laha meel lagu barbardhigo Portage , kaas oo wax walba otomatig ka dhigaya, waxaa jiray barnaamij isku dayay in lagu daydo muuqaalka, oo loo yaqaan 'pacbuilder', laakiin had iyo jeer sax ma ahayn, haddii aan fahmo faalladaada, si kastaba ha noqotee, waxay isku qeexayaan inay yihiin "Distro" horay loo sii diyaariyay
Waxaan rabay inaan ku daro: Maareeyaha xirmada caadiga ah ee Arch waa pacman, tanna si wanaagsan ayaa loola macaamilaa binaries. Laakiin o, caddayntu waa ansax
Haa, sax, faalladaada iyo tan Juan waa 100% sax
Suaal. Ma isticmaashaa barnaamijyada gtk? Hadday sidaas tahay, maxaa calanka -gtk loogu talagalay?
Hoosta Percaff waxaan si fiican ugu sharraxaa, waxaa jira xirmooyin aan ku dhaqaaqo gtk, dhanka kale barnaamijyada daruuri u ah inay wax isticmaalaan, tusaale ahaan gtk, qaar ka mid ah waxay isku soo aruurisaa iyaga oo iska indha tiraya -gtk, sida ku dhacday nvidia-set , haa haa ama hadaad ubaahantahay gtk inaad shaqeyso 🙂
Gentoo waa mid ka mid ah qaybinta ugu ixtiraamka badan kuwa badanaana ugu fiican, laakiin waxaa barbar socda macluumaad been abuur weyn oo ku saabsan qaybinta taas oo dad badan doorbiday inayan dhigin, taas oo ay ugu wacan tahay tabarucaadyadan ay ka dhigayaan Gentoo inay dadka u soo dhowaato.
Welwelka kaliya ee aan qabo ayaa ah in Gentoo ay dhibaatooyin badan ku qabaan darawalada kaararka ATI. ma runbaa mise been?
Doqon yahow, hada waad iga niyad jabisay inaan ku rakibo Gentoo.
Waa hagaag Gentoo ama freebsd.
AMD waa tan khaladaadka sameysa maadaama ATi lahaanshuhu ku xunyahay wax walboo disto ah waana runtii culeys in laga dhigo inay si fiican u shaqeeyaan iyaga oo aan ka dhamaan X: p
+1, AMD waa midka siiya dhibaatooyinka Linux, iyo dhammaan qeybinta guud ahaan, maahan kaliya Gentoo.
Laakiin kama aysan jawaabin dareenkeyga, waa run in AMD aysan laheyn tayo aan wada fileyno, waxaa jira qeybinta oo runtii aan la jaan qaadi karin AMD sida Sabayon, kuwa kale ayaa wax yar dulqaad badan, kooxdee ayaa laga helaa Gentoo?
Sug, horay ayaan u soo dejiyey sabayon iso waxaanan doonayaa inaan tijaabiyo.
Waan xiiseynayaa faalladaada.
A Radeon HD 6870 sifiican ayuu aniga ila shaqeeyey, laakiin tan waa inaad ku dalbataa qaabeynta qaar kernel, sidaa darteed waxay qaadataa shaqo badan si loo rakibo wadayaasha bilaashka ah iyo sidoo kale wadayaasha lahaanshaha ee shaxanka AMD marka loo eego Nvidia.
Waa hagaag sabayon live dvd waxaan ku rakibayaa gentoo oo leh casharka x11tete11x sidaa awgeedna waxaan gebi ahaanba ka takhalusi doonaa riyadan xun ee loo yaqaan debian.
Wax dambi ah kuma lahan Debianites. Laakiin aniga ahaan waa madax xanuun mana fiicna is dhexgal kde.
Diazepan calamada lagu cadeeyay feylka make.conf waxay saameyn kuyeelanayaan nidaamka oo dhan. x11tete11x wuxuu dejiyaa calanka gtk kaliya qaar ka mid ah codsiyada gaarka ah ee ma ahan nidaamka oo dhan. Waxaad ku samayn kartaa adoo tafatirka faylka /etc/portage/package.use. Haddii aan khaldamo waxaan rajeynayaa in x11tete11x uu naga saaro shakiga.
jawaabtaadu waa qumantahay 😀
Mourinho hada tag dijo
Gelitaan aad u fiican, runtii waan jeclahay soo galitaanka noocan ah maxaa yeelay sidaas ayaa dadku ku ogaan karaan gentoo, distro ah «ragga macho».
Ujawaab Mourinho hada tag
Rakibida "dhaqameed" ee saliida, qalabka wax lagu nadiifiyo oo nadiif ah, ayaa laga yaabaa inay cabsi geliso qaar, maadaama ay gacanta ku jirto, iyadoo ka dhigeysa kombuyuutarka mashquul saacado badan oo la soo ururinayo Si loo yareeyo suurtagalnimada khaladaadka (iyo inaad awood u yeelatid inaad waxyaabo kale ku sameyso pc-ga), had iyo jeer si aad u rakibto waxaan isticmaalaa pendrive ka SistemRecue CD, oo horeyba u ahaa nolol nool, kaas oo u oggolaanaya rakibidda iyada oo aan wax dhibaato ah laga qabin baaritaanka ama xulashada muraayadaha ( Waxaan ku dhacaa ubuntu live), nuqul ka qaadashada iyo dhajinta amarrada buug-gacmeedka dhib la'aan. Waa inaad xisaabta ku darsataa haddii aad u isticmaali doontid gentoo garaaf ahaan, markii aad soo uruurineyso kernalka hubi inuu la jaan qaadayo xorg ... markaa waa inaad aqriso buug-gacmeedka iyo xorg-ka si aan laba jeer loo soo kicin. Sidoo kale waa inaad ku qortid xorg.conf gacanta go'aannada, haddii kale way dhacdaa. Sikastaba xaalku ha ahaadee, hadii uu jiro qalad bilaabis ah, waxaad dib uga soo gali kartaa live cd-ka wax walbana waad dib u eegi kartaa, waa inaadan lumin dulqaadka, oo aad wax walba dib u sameyso, sidii aniga igu dhacday 😛
Ku jawaab marito
Dadyahow, waa su’aal doqon ah, Ma la tifaftiri karaa Boostada? maxaa yeelay dhowr qof ayaa igala hadlaya arrimo kala duwan, sida sida loo sameeyo kaarka fiidiyowga ee Intel-ka ah mid shaqeynaya (oo ay tahay in la taabto iyo kuwa kale maxaa yeelay ugu yaraan hal qof oo qaba wixii aan halkaa dhigay (oo ah ku dhowaad waxa wiki yiraahdo), way sameysay uma shaqeynayo isaga), markaa kadib waxaan jeclaan lahaa inaan sameeyo dib u eegis ku darista dhammaan xalalkaas iyo xiriirinno gaar ah oo gaar ah oo lagu xalliyo arrimahaas, ma sameyn kartaa?
Ma waxaad kudareysaa pdf kale?
Fikradda waxay noqoneysaa in waxyaabo lagu daro PDF-ka lana soo dejiyo nooca cusub (fikirkeyga shaqsiyeed waa inaan cusbooneysiiyo hagahan dhammaan tilmaamaha iyo xalalka xaaladaha sida kaararka fiidiyowga, iwm) (Waxaan kaliya u hadli karaa nvidia, iyo KDE, kuwaas oo ah waxyaabaha aan isticmaalo 🙂) markaa hadaad ii sheegto gudiga aad haysato iyo sidaad u xalisay, waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro (sidaad u xalisay hadii aad dhibaato ku qabtid)
Hadda waxaan rakibaa gentoo, waxaan isticmaalaa ati radeon 6450, waxaan kuu sheegi doonaa sida ay wax u dheceen.
Waxaan sidoo kale u isticmaalaa shabakada wifi sidii fiilooyin.
Haa waad awoodaa, markii aad soo rartay, ila soo xiriir ama mid ka mid ah maamullada oo waxaan ku dari doonaa boostada. 🙂
Wanaagsan! Mahadsanid 😀
Hagaag, waxaan ku helay cilado badan nidaamkaan rakibida 😀
Isku day sabayon 64 bit live.
Waxaan soo diraa qalad markaan ururinayo, maxaa yeelay waxaan isku dayay inaan ku rakibo xuubka 32 bits oo aan kala soo baxo marxaladda 32.
Markaad isticmaaleyso locale-gen waxaan dirayaa qalad ah es.ES-UTF-8 markaan isticmaalo es.MX-UTF-8.
Laakiin haye, waxaan ka soo dhejin doonaa berrito rasmiga rasmiga ah ee live live cd.
Hadda oo aan arkay, sabayoonku waxay rakibaysaa 50 gbs. Cajiib.
waa inaad wax ka qabataa CD-ga tooska ah ee isla dhismaha, oo sheyga u-eg wuxuu u muuqdaa qalad qaab-dhismeed sababtoo ah sida aad ugu qortay halkaas,
waa inaad sameysaa:
badbaadi, ka dibna samee deegaanka-gen
haddiiba ay jirto shaki xD:
Ka dib markaad aragto qaybta KDE ee qaybta 'Sabayon' iyo rakibidda 'Sabayon' waa 51 bgs, marka la eegona waa 21 gbs.
DIGNIIN: Kuwa rakibaya KDE 4.9.5 qaybta tababarka ee sameeya:
p = proj / kde.git; a = blob_plain; f = Documentation / pack.keywords / kde-4.9.keywords »
wget si sax ah ugama soo dejineyso feylka, markaa waa inaad gacanta ku gelisaa iskuxiraha oo aad nuqul ka sameysaa dhamaan waxyaabaha kujira faylka KDE-4.9.5.keywords, gudaha /etc/portage/package.keywords/
Goor dambe markaan cusbooneysiiyo dib-u-eegista cusub ee PDF-kan waan sixi doonaa arrimahan, sidoo kale waxaan ku dari doonaa «ChangeLog» si aad u ogaato inaan uga beddelayo nooc ka mid ah casharrada mid kale
Casharradan ayaa aniga igu habboon, waxaan qorsheynayaa inaan ku rakibo Gentoo berri Fedora iso cusub: B
Ku jawaab car_96
F18 durba way soo baxaysaa O_o ??? Miyaad aragtay khariidadda wadada qaabkan? Meelaha qaarkood F18 waxay noqon doontaa kacaan.
Salaan kadib, talaabo kasta oo casharka ah wali wuu ansaxayaa mise waxaa jira talo soo jeedin dheeri ah oo ay tahay inaan tixgeliyo, waxaan rabaa inaan rakibo Gentoo waana marki iigu horaysay ee aan la hadlo distoorkan, waxaan rajaynayaa inaan helo
Salaan iyo tuto aad u fiican
Runta ayaanan uraacin waraaqda markale, Buug gacmeedka 'Gentoo' wuxuu kugu qaadidoonaa wadada saxda ah, waxaan raacay casharkaan ilaa aad kadhigayso jadwalka oo aad kusugan tahay nidaamkaaga, markaa tusaale ahaan uqaato my make.conf ku buuxi samaynta waxyaabo badan oo ku jira USE variable, oo waxaan raacay buugii rasmiga ahaa ee 'Gentoo'